Alao ny Grand Canal araka ny niniana azy ary mandehana fitsangantsanganana an-tsambo amin'ny Canal Barge nentim-paharazana.
Ankafizo ny fiasan'ny hidin-trano, fantaro ny fiainana eny amin'ny lakandrano, ny soavaly mavesatra izay nibaiko ny lakandrano tamin'ny fitsangatsanganana an-tongotra adiny roa sy sasany maraina nankany Digby Lock. Ny Leinster Aqueduct dia fitsangantsanganana adiny iray mety tsara amin'ny sokajin-taona rehetra amin'ny fitsidihana ny lakandrano izay mitondra ny Grand Canal ambonin'ny renirano Liffey. Sa mankafy fitsangantsanganana iray adiny iray sy sasany hariva mamakivaky ny ambanivohitra mangina mankany amin'i Lock of McCreevy ??
Ny fitsangantsanganana rehetra dia manokana ho an'ny vondrona misy anao, hatramin'ny mpandeha 12, ary miainga avy eo afovoan'i Sallins. Ny sambo fitsangatsanganana dia avy any Harbour Sallins izay 30 minitra monja avy eo afovoan-tanànan'i Dublin amin'ny lamasinina ary eo akaikin'ny lalambe M7 no misy azy. Ity barge canal nentim-paharazana tafaverina amin'ny laoniny ity dia manana atitany malalaka misy fatana mirehitra kitay, seza ivelany ary misy toeram-pidiovana ary bara iray eo amboniny. Atambaro ny fitsangantsangananao miaraka amin'ny sakafo any amin'ny iray amin'ireo trano fisakafoanana manoloana rano ao Sallins.
Adventure sy hetsika, Outdoors, Fianakaviana ankohonany, Natiora sy Biby, Eo ambonin'ny rano, Naas
Canal View, Sallins, County Kildare, Irlandy.